Firenena dimy no mangataka onitra amin'i Iran noho ny fianjadian'ny Boeing Okrainiana
Home » Fampihorohoroana sy heloka bevava ho an'ny mpandeha: » Firenena dimy no mangataka onitra amin'i Iran noho ny fianjadian'ny Boeing Okrainiana
Nanambara ny minisitry ny raharaham-bahiny kanadiana Francois-Philippe Champagne fa i Canada, Afghanistan, United Kingdom, Sweden ary Ukraine dia mitaky ny handoavan'ny Iran onitra ho an'ny mpandeha Okrainiana iray. Boeing Jet 737 notifirin'ny balafomanga iraniana.
Raha ny filazan'ny minisitra dia tokony hanaiky tanteraka ny andraikitra amin'ny fiaramanidina nidina i Iran ary hanefa ny adidiny amin'ireo fianakavian'ireo niharan'izany loza izany. Manantena ny handoavana onitra ara-potoana sy mifanaraka amin'ny lalàna iraisam-pirenena ireo firenena.
Ho fanampin'izay, niantso ny famotopotorana feno sy mahaleo tena momba ny tranga i Champagne.
Kanada, Afghanistan, Angletera, Suède ary Okraina koa dia namorona vondrona manokana iray izay hampahafantatra amin'ireo havan'ireo niharam-boina ny fivoaran'ny fanadihadiana ary handray anjara amin'ny fanampiana mety ilain'izy ireo.
Ukraine International Airlines' Boeing Mpandeha 737 no notifirin'ny balafomanga mpiady amin'ny fiaramanidina Iraniana ary nianjera tamin'ny 8 Janoary tao Tehran. Vokatr'izany dia olona 176 no maty - mpandeha 167 sy mpikambana ekipa sivy. Rehefa avy nandà ny maha-voarohirohy azy tamin'ilay fianjerana ary nilaza fa nisy olana ara-mekanika nidina ilay fiaramanidina, dia voahidy porofo tsy azo iadian-kevitra i Iran nony farany ary noterena hiaiky ny tompon'andraikitra tamin'izay nitranga izy: ny mpiasa jeneraly ao amin'ny tafika Iraniana dia nilaza fa "diso" izy ireo nitifitra fiaramanidina Okrainiana, satria "diso ny fijerin'izy ireo" azy io ho balafomanga fitsangantsanganana.
Greater Fort Lauderdale CVB manendry filoha lefitra vaovao
Herinandrom-baovao, Toeram-pianakaviana vaovao: Sands Resorts Macao dia manolotra fitsangatsanganana lohataona tsy hay hadinoina any Etazonia